Madaxda Africa oo ka hadlay la-dagalanka Argagaxisada
Arbaco,Septembar.2014 [GO] Madaxwaynaha DF Xasan Shiikh Maxamuud ayaa ka qayb galay shir madaxeedka Midowga Africa ee la-dagalanka Argagaxisada kaasoo lagu qabtay magalada Nayroobi.
Madaxda kale ee ka socotay dalalka Afrika ee iyagana qeyb ka ahaa shirka loog hadlayay amniga iyo argagixasada waxaa ka mid ah madaxweynayaasha Kenya, Najeeriya, Jaad,iyo sidoo kale Ra'iisul wasaraha a Al-Jeeriya ayadoo aysan goob joog ahayen laamaha sirdoonka ugu sareeyo wadama afrika ee ay la dageen dhibaatooyinka argagixisada.
Waxaa laga dooday qaabka loo dabar goyn karo argagixisada ku sugan dalalka Afrika qaarkood kuwaas oo carabka lagu adkeeyay in ay sii xoogeysanayeen sanadahii ugu dambeeyay.
Dhawaan dalka Itoobiya waxaa ka dhacay kulan ay dalalka Afrika kaga hadlayeen arrimo badan oo ay kamid tahay amniga gobolka iyo dadka qaxootiga Soomalida ah ee ku nool dalka Kenya sidii dib loogu celin alhaa Soomaliya.
Shirkan ayaa ku soo aadaya xili hawlgal loogu magac daray Badweynta Hindiya oo ka dhan ah Al-Shabaab uu Soomaliya ka socda hwalgalkaas waxaa Al-Shababa lagaga qabsaday seddex magaalo oo muhiim u ahay Ururka.